Mariela Carril | | ကြည့်ဖို့ဘာလဲ, Washington
အမေရိကန် ၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်းရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတို့ကြောင့်ဖြစ်သည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအမြဲလည်ပတ်လိုသောအထင်ကရနေရာများရှိသည်။ ကျနော်တို့စာရင်းကြီးတစ်ခုလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကဒီနေ့ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်မှာပါ ၀ င်တဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှစ်ခုကထိပ်ဆုံးငါးခုထဲမှာပါတာမှန်ရဲ့လား။
La CASA Blanca ၎င်းသည်အမေရိကန်ပါဝါ၏ထိုင်ခုံဖြစ်သည်၊ အနည်းဆုံးဟောလိဝုဒ်နှင့်ယင်းတို့၏ပုံစံပင်ဖြစ်သည် ပင်တဂွန် ၎င်းသည်အရေးကြီးသောစစ်ရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနေရာနှင့်တူသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားမလား ဒီတော့ဒီမှာမင်းကိုထားခဲ့ပါ ဤကြီးစွာသောခရီးသွားလည်ပတ်မှုနှစ်ခုလုပ်နေသည့်အခါသင်သိရန်လိုအပ်သမျှ။
အိမ်ဖြူတော် ၎င်းသည်ယူအက်စ်သမ္မတ၏တရားဝင်နေထိုင်ရာဖြစ်သည် ၀ ါရှင်တန်ဒီစီသို့လာရောက်လည်ပတ်သူများသည်အမေရိကန်သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုလေ့လာရန်အလည်အပတ်သွားနိုင်သည်။ အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်မတိုင်မီတိုင်အောင်, သင်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ဘူး, အထောက်အကူပေမယ့်စိတ်ပျက်စရာတစ်ခုခုပေမယ့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမှပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတ Michelle Obama သည်ဓာတ်ပုံများကိုခွင့်ပြုခဲ့သည် နာမည်ကြီးအိမ်ဖြူတော်ခရီးစဉ်အပေါ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နည်းပညာအသစ်တွေကဒီကိစ္စကိုဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်အမင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေလုပ်ဖို့ဖိအားပေးတယ်။ ဒီတော့ဒီနေ့ခေတ်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအိမ်ထဲ၌ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံ WhiteHouseTou နှင့်အတူလူမှုရေးကွန်ယက်များသို့တင်ပို့နိုင်သည်r ။ အိမ်ဖြူတော်၏ ided ည့်လမ်းညွှန်ခရီးစဉ်ကိုဘယ်လိုသွားနိုင်မလဲ။ ပထမ သင်ကြိုတင်မှာကြားထားရန်လိုအပ်သည် နောက်ပြီးသုံးပတ်မပြည့်ခင်သင်၌ခြောက်လမတိုင်မီသင်ရှိသည်။
ခရီးစဉ်အတွက်တောင်းဆိုချက် ၀ ါရှင်တန်ရှိသင်၏တိုင်းပြည်သံရုံးမှတစ်ဆင့်သင်လုပ်ရမည်။ သင်၏အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားသောဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်၊ ရက်စွဲများနှင့်လူ ဦး ရေကိုသင်ချန်ထားရမည်။ Gu ည့်လမ်းညွှန်လှည့်လည်မှုများသည်ည ၇း၃၀ မှ ၁၁း၃၀ နာရီ၊ အင်္ဂါနေ့မှကြာသပတေးနေ့နှင့်သောကြာနေ့မှစနေနေ့အထိ ၇း၃၀ မှ ၁း၃၀ နာရီအကြားဖြစ်သည်။.
သင်မဝင်ရနိုင်သောအရာများရှိသည် အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ်၊ ကင်မရာ၊ ဗီဒီယိုကင်မရာ၊ အစားအစာ၊ သောက်စရာ၊ စီးကရက်၊ သင်ဤအရာအားလုံးကိုအနီးအနားရှိဟိုတယ်များ၊ သော့ခတ်ထားသည့်အရာများအတွက်အနည်းငယ်ချန်ထားနိုင်သော်လည်းသင်ထွက်ခွာသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၌အရာအားလုံးရှိသည်။ အိမ်ဖြူတော်တွင်သော့ခတ်စရာမရှိပါဟုတ်တယ်ဟိုတယ်တွေနဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ Union Station ။ ဟုတ်တယ်၊ သော့၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ထီးတို့ဖြင့်သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
အထက်တွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်မှ စတင်၍ သင်သည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကင်မရာများနှင့်စမတ်ဖုန်းများဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည်။ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် selfie တုတ်များကိုခွင့်မပြုပါ. ဒီခရီးစဉ်ကနာရီဝက်လောက်ကြာပါတယ် သငျသညျလုံခြုံရေးအစီအမံလွန်တစ်ကြိမ်။ သငျသညျအများအပြားအခန်းများကိုဖြတ်သန်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့် သမ္မတနှင့်သူ၏မိသားစုနေထိုင်ရာနေအိမ်၊ သို့မဟုတ်ကျော်ကြားသောဘဲဥပုံအခန်းထဲသို့သင်ဝင်ခွင့်မရှိပါ နှင့်အနောက် Wing ။ ဟုတ်တယ်၊ လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်တွေနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ သူတို့နဲ့သင်ဆက်သွယ်နိုင်အောင်သူတို့ကမေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။
အိမ်ဖြူတော်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲလမ်းပြမှုအတွက်အနီးဆုံးဘူတာကတော့ Metro Center (၁၃ လမ်းထွက်ပေါက်) ။ စက်လှေကား၏ထိပ်ကိုရောက်သောအခါ ၁၃ လမ်းတောင်ဘက်မှထွက်ခွာ။ E Street သို့လှည့ ်၍ ၁၅ လမ်းသို့တည့်တည့်သွားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်မည်သည့်ခရီးစဉ်အတွက်မဆို sign up မပြုလုပ်ဘဲသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နေပါကသင်စောစောရောက်သင့်သည်။ ဒါဟာ 13 လမ်းပေါ်မှာတန်းစီဖွဲ့စည်းသည်။
အိမ်ဖြူတော် Vis ည့်သည်စင်တာသည်အိမ်ဖြူတော်နှင့်အနည်းငယ်သာကွာဝေးသောကြောင့်သွားရောက်လည်ပတ်သင့်သည်။ ၎င်းပြပွဲသစ်ကိုအိမ်ဖြူတော်သမိုင်းဆိုင်ရာအသင်းမှပေးအပ်သည့်အရာဝတ္ထု ၉၀ ခန့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုပြသခြင်းမရှိသေးပါ။ ဥပမာ Franklin D. Roosvelt ၏စားပွဲခုံဖြစ်ပြီး ၁၄ မိနစ်ကြာဗီဒီယိုတစ်ခုကထိုခရီးစဉ်မတိုင်မီကြည့်ရှုရန်အကြံပြုလိုသည်။
ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးသည်တစ်နာရီခွဲကြာသည်။ ခရစ်စမတ်၊ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်နှစ်သစ်ကူးပွဲများ မှလွဲ၍ ယနေ့နံနက် ၇း၃၀ မှညနေ ၄း၀၀ အထိဒီ site ကိုဖွင့်နိုင်သည် ဝင်ပေါက်ကအခမဲ့ရန် လက်ဆောင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိပြီး သမ္မတရွေးကောက်ပွဲစားပွဲခုံပုံရိပ်ကို Oval Room တွင်တွေ့နိုင်သည်၊ သင်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံး၊ အကယ်၍ သင့်မှာမကြာမီစီစဉ်ထားသောခရီးစဉ်တစ်ခုရှိပါကဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်တွင်အိမ်ဖြူတော်ခရစ်စမတ်သစ်ပင်၏အလင်းကိုတရားဝင်ဖွင့်လိမ့်မည်ဟုငါပြောမည်။
ပင်တဂွန် Washington DC ၏အပြင်ဘက်တွင်ရှိပြီး Arlington တွင်တည်ရှိသည်။ ဒါကဖြစ်ပါသည် Barracks Gအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးဌာန၏ဗိုလ်ချုပ် y gu ည့်လမ်းညွှန်ပါလမ်းများဖွင့်လှစ်ထားသည်။
ဒီလမ်းညွှန်ခရီးစဉ်များ ကြိုတင်ဘွတ်ကင်များကို ၁၄ ရက် ကြိုတင်၍ ကြိုတင်မှာထားရမည့်ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်မပိုစေရ။ ဖြစ်ပျက် တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့အထိရုံးပိတ်ရက်များမှအပနံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၃ နာရီအထိဖြစ်သည်။ အုပ်စုများသည်အလျင်အမြန်ဖြည့်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းစိတ်ကူးကိုနှစ်သက်ပါကသင်စောစီးစွာစာရင်းသွင်းသင့်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများအတွက်လျှောက်လွှာကိုသံရုံးမှတဆင့်လျှောက်ရမည်.
ည့်လမ်းညွှန်များသည်တစ်နာရီကြာပြီး ၂ ကီလိုမီတာခန့်အကွာတွင်ရှိသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးသောဤစပ်စုနေသောအဆောက်အအုံအတွင်း၌ ယူအက်စ်စစ်တပ်ခွဲခြားထားသောဌာနခွဲလေးခု၏သမိုင်းကြောင်းကိုသင့်အားရှင်းပြလိမ့်မည်။ သင်သည် ၂၀၀၁၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နောက်ပိုင်းပြုလုပ်ခဲ့သောအတွင်းပိုင်းအထိမ်းအမှတ်ကိုလည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ချာ့ချ်တစ်ခုနှင့်သူရဲကောင်းများခန်းမအမည်ရှိသည်။ သေမင်း၏
ပင်တဂွန်မှာကားရပ်နားရန်နေရာမရှိ သငျသညျအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်ရောက်ရှိရပါမည်။ အနီးဆုံးဘူတာသည်မြေအောက်ရထား၏လိမ္မော်ရောင်လိုင်းပေါ်ရှိပင်တဂွန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင့်တွင်ကားတစ်စီးရှိပါက၎င်းကိုပင်တဂွန်စီးတီး Mall တွင်ရပ်ထားနိုင်ပြီး၎င်းအားစစ်အဆောက်အအုံနှင့်လမ်းသွားလမ်းလာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမှတဆင့်ခွဲထားသည့် ၅ မိနစ်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ visitors ည့်သည်များ၏ဝင်ပေါက်သည်မြေအောက်ရထားဝင်ပေါက်အနီးရှိပင်တဂွန်ခရီးသွားပြတင်းပေါက်မှဖြစ်သည်။
သင်အတည်ပြုရမည် ခရီးစဉ်မတိုင်မီအနည်းဆုံးတစ်နာရီအတွင်းစစ်ဆေးပါ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းအတည်ပြုစာရွက်စာတမ်းများနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုတင်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ကြီးမားသောအိတ်များသို့မဟုတ်ကျောပိုးအိတ်များသို့မဟုတ်လက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ ကင်မရာများသို့မဟုတ်ကိရိယာများကိုခွင့်မပြုပါ အီလက်ထရောနစ် အခြားသဘာဝတရား၏။ အတွင်းပိုင်းခရီးစဉ်အပြီး ၉/၁၁ သတိရအောက်မေ့ရာနေရာ၊ သင်ဆိုင်းဘုတ်များအောက် ၁၀ မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ရမည့်နေရာကိုလျှောက်လှမ်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပေးလိုသည်။
တစ်ခေါက်၊ တစ်မြို့၊ နှစ်မြို့လည်ပတ်မှု။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » Washington » အိမ်ဖြူတော်နှင့်ပင်တဂွန်သို့မည်သို့လည်ပတ်မည်နည်း